Ukukhula kwebhizinisi lakhe lokudla sekwenze wathuthela ekhishini elikhulu emva konyaka esebenzela kwakhe. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Umnikazi weHomecooked, uNkk uNokwanda Dlamini, oneminyaka engu-34, uthi ukuze ibhizinisi liqale kwaba umnyeni wakhe uLungisani owaqhamuka nomqondo nomhlahlandlela webhizinisi.
“Ngesikhathi kuvalwe izwe, ngangiphekela ozakwethu emsebenzini ufishi nama-chips, ngibapha nje, hhayi ngoba ngase ngibadayisela. Ngangiba nendlela engiwupakisha ngayo, okwakwenza bachazeke, nokwagcina ngokuthi bathi angibadayisele ngoba base bebaningi ababewuthanda bencoma ubumnandi bawo,” kulanda yena.
Amasemishi aseHomecooked epakishwe ngendlela ethatha iso
UNkk uDlamini uthi njengabesifazane abaningi, unothando lokupheka nokuhlobisa ukudla. “(Kwathi) sizihlalele ngelinye ilanga nomnyeni wami, waqhamuka nomqondo wokuthi kuzomele lolu thando ngilukhulise kube yibhizinisi. Ngangingakucabangi mina loko ngoba ngiwumuntu oqashwe ngokugcwele emsebenzini.”
Leli bhizinisi liqale liphekela endlini. Belibheke kakhulu abantu abangasitholi isikhathi sokupheka uma bebuya emsebenzini.
“Indawo yaKwaMashu iyona ebesigxile kuyona kakhulu, negama lethu liyazichaza, siwukudla okuphekwe ekhaya okuthandwa abantu, siqinisekisa ukuthi abantu ababuya emsebenzini, abanemicimbi, imingcwabo nemishado bayakwazi ukusibiza siyobaphekela ngendlela esezingeni eliphezulu kodwa ngenani elingabizi,” kuchaza uNkk uDlamini.
Okunye ukudla kweHomecooked
I-Homecooked ikhule ngamandla ngenkathi kuvalwe izwe njengoba ibiqashwa emingcwabeni eminingi KwaMashu namaphethelo ukuthi yenze amaphasela okudla.
NgoJulayi leli bhizinisi liphumile endlini layongena ekhishini elikhulu lokusebenzela, lapho abantu bekwazi ukuza khona bazothenga kusukela ngezikhathi zesidlo sasemini.
“Kuyinto enkulu ukuthi emva konyaka nje siqalile ukusebenza, sesinekhishi lethu esisebenzela kulona, kuyona le ndawo engizalelwe, ngakhulela kuyona. Kimina loku kusho lukhulu futhi kungenza ngiziqhenye ngelokishi engihlala kulona nangendlela umphakathi esibambisene kamnandi ngayo nawo,” kusho yena.
Ngabe yini le emenza ahluke kwamanye amabhizinisi amaningi okupheka?
“I-Homecooked igxile KwaMashu nezindawo ezakhelene nawo njengeNtuzuma neNanda. Sinezikole esizihambisela ukudla (ngesikhathi sekhefu), othisha bayafaka ama-oda esidlo sasemini. Sazitshela mhla siqala ukuthi sifisa ukwaziwa endaweni esikuyona kuqala bese sisabalala,” kuqhuba uNkk uDlamini.
Uthe bayaphuma eThekwini uma benekhasimende elibadingayo. Uthi ukubambisana nomyeni wakhe kuyasiza njengoba behlukaniselana umsebenzi.
Manje baqashe izisebenzi ezinhlanu. Usuku nosuku baba nokudla kosuku okuphekwa ekuseni ukulungisela izikhathi zokudla kwasemini.
UNkk uDlamini nethimba laseHomecooked
UNkk uDlamini uthi ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanje kube nomphumela omuhle ebhizinisini ngoba yibona abusebenzisela ukukhangisa umsebenzi.
“Leli bhizinisi laziwe ngokuthi abantu bebetshelana ngalo nokusebenzisa kwami izinkundla zokuxhumana,” enaba.
Isifiso sabo wukuba nelinye ikhishi elikhulu elizosiza nangokufundisa intsha eningi ukupheka ukuze ikwazi ukuzisiza idale amathuba emisebenzi nokucobelelana ngezindlela ezehlukene zokupheka ukudla okuphekwa ekhaya.
Facebook : Home Cooked